September 2020 - Page2of4- Latest Myanmar News
နား နှင့်ပတ်သက်သော အိမ်တွင်း ဆေးနည်းတိုလေးများ
September 19, 2020 by Latest Myanmar News
နားအေ ကြာင်း နားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြုလုပ်သင့်သော အရာများ နားတွေမှာ သူ့ဖာသာသန့်စင်စေခြင်းနဲ့ သူ့ဖာသာ ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘာဝသတ္တိရှိပြီးသားပါ။ နားဖာချေးက သဘာဝအရ နားကို စွတ်စိုပေးသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် နားတွေကို မမှန်ကန်တဲ့နည်းတွေနဲ့ သန့်ရှင်းဆေးကြောမူ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ နားမှာထိခိုက် ဒါဏ်ရာ ရခြင်းနဲ့ နားတွင်းကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ( ၁ ) အားတိုင်းနားမကလော်ပါနဲ့ နားဖာချေးတွေဟာ နားနဲ့သူ့ဖာသာ သန့်စင်စေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကောင်းကောင်းအလုပ် လုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် နားဖာချေးတွေဟာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပိတ်ဆို့မနေရင် ကလော်ပြီး မဖယ်ရှားသင့်ပါဘူး။ အပြင်နားစည်အရေပြားရှိ ဂလင်းကနေ ထုတ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ နားဖာချေးတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ နားစည်ရဲ့ အရေပြားကို ကာကွယ်ဖုံးအုပ်ပေးခြင်း ရေကိုတွန်းထုတ်ခြင်းနဲ့ နားတွင်းပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်း စသည်လုပ်ငန်းတွေအပြင်နားအတွင်း … Read more
September 18, 2020 by Latest Myanmar News
ကြွ က်နို့ လက်တွေ့ပျောက်ဆေး (5) ရက်အတွင်းလုံးဝပျောက်ပါသည်..။ ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ကျွန်မ မျက်မြင်ဆေးနည်းလေးဖြစ် တာကြောင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မမောင်လေးခြေထောက်မှာကြွက်နို့ပေါက်တာ သုံးလုံးထိဖြစ်လာပါရဲ့။ဆေးနည်းတွေစမ်းကြည့်ပေမဲ့မပျောက်ပါဘူး။ မုံထူး ကျေးရွာက ကိုညိုမောင်ပြောပြတဲ့ဆေးနည်းနဲ့သုံးရက်ပဲကြာပါတယ် ကြွက်နို့လုံးဝပျောက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကြွက်နို့ပေါက်တဲ့မောင်လေးက စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့် အပြင် ခြံထဲကဧကရာဇ်အပင် အမြစ်တို့ကိုပါ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလို့ သေသေချာချာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်မှာကြွက်နို့ကအမာရွတ်လောက်ပဲထင်ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဆေးနည်းကတော့ ဆန်အနည်းငယ်ယူပါ.. ရေအနည်းငယ်ဖြင့်ဖျော်ပါ(မည်သည့်ဆန်မဆို) ဧက ရာဇ်အဖြစ်ကိုယူပြီးဆန်ဆေးရည်အနည်းငယ်ဖြင့်ခပ်ပျစ်ပျစ်သွေးလိမ်းပါ။(အနာကိုသွေးထွက်အောင်ကုတ်ဖဲ့စရာလုံးဝမလိုပါ) သနပ်ခါးလိမ်းသလို ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးလိမ်းထားပါ။ဆေးခြောက်အောင်ထားပါ။ခြေထောက်ရေမ စိုပါစေနှင့်။အဝတ်စည်းထားရန်မလိုပါ။တစ်နေ့ (3) ကြိမ် နံနက် နေ့လည် ည လိမ်းပေးပါ။ မှတ်ချက် မောင်လေးကတော့အလုပ်မအားလို့ တနေ့၂ ကြိမ်နံနက် ည သာလိမ်းပါသည်။ (5)ရက်လောက်နေလျှင်လုံးဝပျောက်ကင်းသွားပါမည်။ ဆေးလိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့်ကို ပုံများတွင်လည်းရှင်းပြထားပါသည်။မုံထူးကျေးရွာမှ ကိုညိုမောင်နှင့်မောင်ကျော်ကြီးအားအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ ကြွက်နို့ တွေပွားပြီးသတ်မရလို့စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်လက်တွေ့ဆေးနည်းလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။မည်သူမဆို စိတ်ချမ်းသာစွာ ကူးယူခြင်း…မျှဝေခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် May Soe Unicode ကွှ ကျနို့ … Read more
မဖြစ်မနေ ရုံးသွားရမည်ဆိုလျှင် ဒါတွေကို သတိရှိပါ
September 17, 2020 by Latest Myanmar News
ကို ဗစ်ကာလအတွင်း မဖြစ်မနေရုံးသွားရမယ်ဆိုလျှင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ အိ မ်အပြင်သို့ ထွက်ရာတွင် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) နှင့် Face Shield တို့ကို မဖြစ်မနေ စနစ်တကျ တပ်ဆင်သွားပါ။ နာရီနဲ့ အခြားသော accessories များကို အိမ်မှာပဲ ချွတ်ထားခဲ့ပါ။ မိန်းကလေးများအနေဖြင့် ဆံပ င်ကို သေချာစုစည်းသွားပါ။ ရုံးအတွင်းသို့ မဝင်မီ ဆပ်ပြာနှင့်ရေကို အသုံးပြု၍ စက္ကန့် (၂၀) ကြာအောင် လက်ဆေးပါ။ ရုံးဝင်ပေါက်နေရာများတွင် Non-touch thermometer အသုံးပြု၍ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းပါ။ ပုံမှန်ကိုယ်အပူချိန် (၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်/ ၁၀၀.၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အောက်) ရှိမှသာ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်ပါ။ ကိုယ့်စားပွဲပေါ်က နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သီးသန့်ထားပြီး မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်၌ … Read more
September 16, 2020 by Latest Myanmar News
နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားစေခြင်း နဲ့ဓာတ်စာဆေးနည်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊ပြည့်ဝဆီများစားခြင်း ၊Cholesterol သွေးထဲတွင်များခြင်း သွေးတိုး ခြင်း ၊ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ခြင်း မျိုးရိုးလိုက်နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်နှလုံးရောဂါရနိုင်ပါတယ် ကြိုတင်ကာကွယ်နည်း အဆီအနှစ်နည်းသောဆန် ၊အသီးအနှံ ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊အဆီမပါသောအသား ၊အချိုနည်းသောအစားအစာကိုစားပါ သံပုရာရည်ဖျော်သောက်ပါ။ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခဏ်းအနည်းဆုံးမိနစ် ၂၀လုပ်ပေးပါ ဆေးလိပ် အရက် အသင့်သောက်အချိုရည်များရှောင်ပါ။ နှလုံးရောဂါ ဓာတ်စာဆေးနည်း မောပန်းခြင်း ၊ရင်တုန်ခြင်း ၊ချွေးစေးထွက်ခြင်း ၊ခြေလက်မလှုပ်မရှားနိုင်အောင်ဖြစ်ခြင်း လက်မောင်းရင်းများနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ၊စကားပြောသောအခါလေမဆက်သလိုဖြစ်ခြင်း ဆေးနည်း ရှားစောင်းလက်ပ တ်တခုကိုအတုံးလေးများတုံး( အပေါ်ခွံမပါခွာထုတ်) ၊ငါးရံ့ခေါင်းတို ၃ကောင်ခေါင်းဖြတ် ဗိုက်ခွဲ မွန်းပါ ငါးကိုဆား နနွင်း ရှားစောင်းအတွင်းသားနယ်ပေးပြီး ဝမ်းဗိုက်အတွင်း ရှားစောင်း ဂျယ်လီများကိုထည့် ပြီး ပြန်ပိတ်ဝါးညှပ်တံနဲ့မီးခဲရဲရဲကင် ကျက်ရင်စားပါ။ မြန်မာ့ရိုးရာဆေးဖက်ဝင်သစ်ဥအစ်ဖုများ Unicode နှလုံးရောဂါဖွဈပှားစခွေငျး နဲ့ဓာတျစာဆေးနညျး ဆေးလိပျသောကျခွငျး ၊ပွညျ့ဝဆီမြားစားခွငျး ၊Cholesterol သှေးထဲတှငျမြားခွငျး … Read more
September 15, 2020 by Latest Myanmar News
လျော့ေ ပါ့ပင်စင်အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၀ နှစ်ကျော်လျှင် သော်လည်းကောင်းအသက် ၅၀ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၅ နှစ် ကျော်လျှင်လည်းကောင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ပင်စင် ပင်စင်ဟူသောစကားရပ်တွင် ပင်စင်+လုပ်သက်ဆုငွေ ဖြစ်ပါသည်။ ၁. သက်ပြည့်ပင်စင် ဝန်ထမ်းသည် အသက် ၆၀ ပြည်ု့သည့်နေ့တွင်အငြိမ်းစားယူရမည်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးလုပ်သက်မှာ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ ထိ ဖြစိပါသည်။အငြိမ်းစားယူရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့် ၄ လ ခံစားခွင့်ရှိပြီး ပျှမ်းမျှလစာ ခံစားရမည်။ ( လစာနှုန်းတိုးမြှင့်သည့်အချိန်တွင် သီးသန့်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။) ၂. နှစ်ပြည့်ပင်စင် အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက်နှစ် ၃၀ ပြည့်လျှင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ၃. လျော့ပေါ့ပင်စင် အသက် ၅၅ … Read more
မိမိကိုယ်မိမိ သံသယဖြစ်ပီဆိုရင် ဒါလေးတွေ ကျိန်းသေလုပ်ပါ
September 14, 2020 by Latest Myanmar News
ကို ယ့် ကိုယ်ကိုယ် သံသယဖြစ်ပီဆိုရင် ဒါလေးတွေ ကျိန်းသေလုပ်ပါ ခေါင်းတွေ ထိုးကိုက်ပါတယ် ပေါက်ကွဲမတတ် (day 1) လည်ချောင်းမှာ ယားပီးချောင်းခြောက်ဆိုးချင်လာပါတယ်(day 2) အနံ့တဖြေးဖြေးလွင့်လာပါတယ် လုံးဝမပျောက်သွားသေးပါဘူး(day3) ကို ယ်စားတဲ့အစားအစာတွေ အနံ့စပျောက်လာပီ အိမ်သာ အနံ့ဟင်းချက်တဲ့အနံ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အနံ့လုံးဝ အရှင်းပျောက်သွားပါပီ (day 4) စိတ်အေးအေးထားပါ စိတ်ကိုတင်းထားပါ စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားပါ ဘာသောကမှ မရောက်ပါနဲ့ရှင် ဒီရောဂါသည် ကိုယ်ခံအားလျော့တဲ့အချိ န်ဝင်လာတတ်ပြီး ကိုယ်ခံအား ပြန်ပြည့်တဲ့အခါ သူ့အလိုလို ပြန်ထွက်သွားမှာပါ မိမိလုပ်ရမှာက ရောဂါအခံ ဆီးချိူ သွေးချိူသွေးတိုး ရှိလားအရင်စစ်ရပါမယ်(အိမ်မှာပဲ စက်ဖြင့် စစ်ဆေးပါ လူ အထိတွေ့နည်းနိုင်သလောက် နည်းအောင်ဂရုစိုက်ပါ) ရောဂါအခံရှိလျှင် ဆေးရုံတန်းသွားပါ အကယ်၍ ရောဂါအခံမရှိခဲ့လျှင် ကြက်ဥ တစ်နေ့ ၂ လုံးစားရန် နံနက်စာ … Read more
September 13, 2020 by Latest Myanmar News
သဘာဝနည်းဖြင့် သည်းခြေေ ကျာက်ကို ဖယ်ရှားနိုင် သည်းခြေ၌ ကျောက်တည်သော ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုမှာ အစာများများစားပြီးနောက် ဝမ်းဗိုက်ပြည့်အင့် ဖောင်းကားလာကာ အစာမကြေသလို ခံစားရမည်။ ရောဂါပြင်းထန်ပါက အသည်းတစ်ဝိုက်တွင် နာကျင်မှုကို ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သဘာဝနည်းဖြင့် သည်းခြေကျောက် ဖယ်ရှားနည်းမှာ ပထမငါးရက်တွင် နေ့စဉ် ပန်းသီးဖျော်ရည် (Apple Juice) လေးခွက်သောက်ပါ။ သို့မဟုတ် ပန်းသီး လေး-ငါးလုံး စားပါ။ (ပန်းသီးေ ဖျာ်ရည် သို့မဟုတ် ပန်းသီး မိမိနှစ်သက်ရာ စားသောက်နိုင်သည်။) ပန်းသီးဖျော်ရည်သည် သည်းခြေကျောက်ကို ပျော့စေနိုင်သည်။ ထို ငါးရက်အတွင်း အစားအစာကိုလည်း ပုံမှန်စားသုံးရန် ဖြစ်သည်။ ခြောက်ရက်မြောက်နေ့တွင် ညစာမစားဘဲ ထိုနေ့ညနေ ၆ နာရီတွင်မှ ဆားခါးတစ်ဇွန်းကို ရေနွေးတ စ်ဖန်ခွက်နှင့် သောက်ပါ။ ည ၈ … Read more
September 12, 2020 by Latest Myanmar News
၁။ အရဟံ = (ဝေးကွာခြင်းအနက်) ကိ လေသာတို့မှဝေးကွာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ ၂။ အရ , ဟံ = (အရ = အရိ။ ရန်သူတွေကို ။ ဟ = ချေမှုန်း အနိုင်ယူခြင်းအနက်) ကိလေသာရန်သူတို့ကို အပြီးသတ်ချေမှုန်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။ ၃။ အရ , ဟံ = (အရ = အကန့် ။ဟ = ဖျက်ဆီးခြင်းအနက်) သံသရာစက်၏ အကန့်ဟူသော အကြောင်းကိလေသာတရားတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ ၄။ အရဟံ = (အရဟ = ထိုက်ခြင်းအနက်) တစ်လောကလုံးရဲ့ ဦးညွတ်လေးစားမှုလှူဒါန်းမှု ထိုက်တန်တ်ာမူသော မြတ်စွာဘုရား။ ၅။ အ, ရဟံ = (ရဟ = ဆိတ်ကွယ်ရာ ။ … Read more
ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ မြတ်သော အဆုံးအမ
September 11, 2020 by Latest Myanmar News
ပါေ မာက္ခချုပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဩဝါဒ ကပ်ဆိုက်တဲ့ အခါ – ( 1 ) ငါးပါးသီလ မြဲခြင်း (2) အသားငါး စားသုံးမူ့နည်းခြင်း (3)ပရိတ်ရွတ်ပုံနေရာ ကျခြင်း တို့ဟာ ကပ်ဘေးကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ခြင်းပဲတဲ့ …ကပ်ဆိုက်တယ် ဆိုတာ လူသားတွေ လောဘ , ဒေါသ , မောဟတွေ များလို့သဘာဝတရားကြီးက ရပ်တန့်သွားအောင် ပညာပေးတာ … ငါးပါးသီလ လုံခြုံအောင် စောင့်ထိမ်းခြင်းရဲ့ အကျိုးကို သိပ္ပံကိရိယာတွေနဲ့တိုင်းလို့မရဘူး … ကမ္ဘာလောကဓါတ်ကြီးဟာသတ္တဝါတွေရဲ့ ကံတရားအတိုင်း ဖြစ်တည်နေတာ …ဘုရားရှင်တွေ မပွင့်တဲ့ အချိန် သာသနာပကာလမှာလည်း လူသားတွေ ငါးပါးသီလ လုံခြုံကြလို့ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ ဝဠာဟာက … Read more
September 10, 2020 by Latest Myanmar News
ရှားစောင်းလ က်ပက် ချက်ဆေး ကျမကိုယ်တိုင် ရှားစောင်းလက်ပက် ချက်ဆေးဖော်စားပီး ရ လာဒ်ကောင်းတွေရှိတာမို့ ချက်ဆေးဖော်နည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်နေ့ လဖက်စားဇွန်း ၁ ဇွန်း ပုံမှန်စားပေးမယ်ဆိုရင် ဆီး ဝမ်း သွေး လေ အတွက် အထူးသင့်လျှော်ပါတယ်။ ဓမ္မတာ မမှန်သော အမျိုးသမီးများအတွက် ချက်ဆေးစားပီး တစ်လအတွင်း သိသာပါလိမ့်မယ်။ ဆီးအောင့်တဲ့အခါရှားစောင်းလက်ပက်ချက်ဆေး စစ်စ စ် ( သို့ )ချက်ဆေးမရှိက အတွင်းသား ဂျယ်လီကိုခြစ်ပီး ပျားရည်နဲ့ စားသုံးပေးပါ။ အူလမ်းကြောင်းကို ရှင်းပေးတာမို့ဝမ်းချုပ်သူများအတွက်လည်း အထူးသင့်လျှော်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်သူများအတွက်တော့ ဝမ်းချုပ်တဲ့ရက်တွေမှာလဖက်စားဇွန်း ၂ ဇွန်း ( သို့ ) ၃ ဇွန်း စားပေးပါ။လေပုပ်များနဲ့ ဝမ်းပုပ်များ သွားပါလိမ့်မယ့်။ ခုကတော့ ရှားစောင်းလက်ပက် ၁၀ … Read more